Munaasabad Casho sharaf oo lagu soo dhawanyay Cabdi Bile Cabdi ayaa lagu qabtay Muqdisho – Radio Muqdisho
Munaasabad casho sharaf ah oo laguna dhiiri galiyay ayaa loo qabtay cabdi bile cabdi islmarkaan ay ka qeyb galeen wasiiro iyo xilibaano ka tirsan labada Gole ee barlamaanka Soomaaliya.
intii ay socotay xaflada ayaa waxaa loga hadlaya tariiqda uu ka sameeyay Dalka ayna tahay in talooyinka loo dhiso si Dhalinyarada ay ugu dayadan .
Qaar kamida Xilbaanada xaflada ka qeyb galay ayaa sheegay in ay gacmo furan ay ku soo dhaweynayaan Cabdi Bile.
sidoo kale waxa ay ku amaaneen dadaalka uu ku bixiyay sharafta Dalka iyo umada Soomaaliyeed ee ku aadaneed guushii taariiqiga aheyd uu gaarsiyay Dalka.
Cabdi Bele Cabdi oo isna ka hadlay Musnaabada ayaa u mahadceliyay musuulinyinta casho sharafta u sameysay sido kale waxa uu sheegay soo dhaweynta uu kala kulmay dowladda iyo shacabka aysan jirin.
Ugu dambeynti Wasiir ku Xigeenka Wasaarada Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Mudane Cilmi Cumar Ceysane oo soo xeray Munaasabada lagu soo dhaweynayay Cabdi Bile Cabdi ayaa xusay in Cabdi Beli uu yahay wali shaqsi u taagan Hormarinka Dhalinyarada kuna soo dhaweynayanaa Magaalada Muqdisho.
Saldhig Ciidan oo lagu Weeraray Gantaalo Dalka Suuriya